| 2021 Sep 25 | 08:02 am	189
न्यु जर्सी, असाेज ९: देश र राष्ट्रियताको महत्त्व कति हुन्छ ? अमेरिकाको न्यु जर्सी राज्यमा रहेका नेपालीको मुहार हेरेर पुग्थ्यो। त्यो दिन थियो सेप्टेम्बर २० अर्थात् गत असोज ४ गते सोमबार। नेपालले संविधान दिवस मनाएको भोलिपल्ट।
जुन दिन अमेरिकाको न्यु जर्सी राज्यको जर्सी सिटीस्थित सिटी हल भवनको ताज छानामा नेपालको झन्डा फहराइयो। त्यसबेला उपस्थित नेपालीको आँखा गर्वले रसाए। छाती ढक्क फुलेर शिर उच्च भएको महसुस गरे। ‘सँगै नेपालको राष्ट्रियगान बज्दा नेपालकै कुनै भूमिमा रहेको महसुस भयो’ जर्सी सिटी सहरकी तत्कालीन डाइभर्सिटी रइन्क्लुसन बोर्डकी सल्लाहकार डा. विष्णुमाया परियारले भनिन्। यहाँ संविधान दिवसको अवसर पारेर सहरका मेयर स्टेभन फुलपले नेपालको सम्मान गर्दै सिटी हल भवनको ताज छानामा नेपालको झन्डा फहराएका हुन्। उनले नेपालीकै उपस्थितिमा झन्डोत्तोलन गर्दै राष्ट्रगान बजाएका थिए। यो दिनलाई
यहाँ ‘नेपालको झन्डा फहराउने दिवस’का रूपमा पनि मनाइन्छ। यो दोस्रो पटक मनाइएको हो। यसअघि सन् २०१७ जुन ३० तारिखमा यस्तै कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
सोमबार दिवस मनाउन आयोजित विशेष कार्यक्रममा फुलपका साथै काउन्सिल प्रेसिडेन्ट जोयस वाटरम्यान, नेपाली कार्यवाहक महावाणिज्यदूत विष्णुप्रसाद गौतम पनि उपस्थित थिए। कार्यक्रममा निवर्तमान काउन्सिल प्रेसिडेन्ट एवं काउन्सिल म्यान एट लार्ज रोलान्डो लाभारो र नेपालका लागि सिस्टर सिटी इमिसरी (विशेषदूत) साथै जर्सी सिटीको रोजगारी तथा तालिम बोर्ड सदस्य डा. विष्णुमाया परियारको सहभागिता थियो।
अमेरिकी भूमिमा यसरी नेपाली झन्डोत्तोलन गर्दै नेपालको राष्ट्रगान बजाउँदा उपस्थित नेपाली हर्षित देखिन्थे। यहाँ सिटी हल भवनको ताज छानामा नेपालको झन्डा फहराइन्छ। यसरी नेपालको झन्डा पनि सरकारी भवनमा फहराउनेमा यो पहिलो अमेरिकी सहर हो। जर्सी सिटी सहरकी तत्कालीन डाइभर्सिटी रइन्क्लुसन बोर्डकी सल्लाहकार डा. विष्णुमाया परियारको पहलमा उक्त काम भएको हो। यसले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने डा. परियार बताउँछिन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट